Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Maal Baranne, Maalitti Tarkaanfanna?
(Dr Solomon Ungashe irraa)
Gama kanbiraan Hagayya 6, 2016 guyyaa gaddaa ta’ee barabaraan yaadatama. Lammiiwwan lakkoobsaan 50 ol ta’an haala suukaneessaa dhaan ajjeefamanii wareegama bilisummaa ta’aniiru. Dhibbootaan kan lakkaawaman madaayaniiru. Lakkoobsi isaanii kan hin beekamne mana hidhaa galaniiru. Maatiif firri, ollaaf biyyi, gaddaa jira. Bahaa hanga lixaatti, kaabaa hanga kibbaatti Oromiyaan maatii gaddaa jiru ta’uun ifaadha. Isa kanas seenaan barbaraan yaadata. Gadda kana keessaa bawuun kan danda'amu injifannoo booda.
Oromoo biyya alaa jiru iraa maaltu eegama? Dirqamni guddaan qabnu ummata biyya keessaatti diina dura dhaabbatee abbaabiyyummaaf falmaa jiru haala qindaawaa fi ittifufiinsa qabuun deggeruudha. Jiruun bor otuu hin ta'in har'a jalqabuu qaba. Garee qabsaawota godiinaalee Oromiyaa keessa jiran wajjiin hariiroo uumuudhaan deggersaa biraan gawuu danda’u godiinaa hundaaf uumuu barbaachisa. Fakkeenyaaf garee godiinaa Arsii Lixaa irratti xiyyeefatee qabsaawota godiina sana jiran wajjin hojjetu. Godiinaalee hafaniifis akkasuma. Akkanaan hojjechuun waa lama gargaara. Tokkoffaa ijaarsiif qabsoo walfakkaataan bakka hundatti akka jajjabaatan taasisa. Lammaffaa godiinaaleen hundi quba walqabaatanii waliin akka socho’an jajjabeessa. Jiruu kana fakkaatu hojjechuuf Oromoon biyya Oromaa jiraatu bakka hundatti walgayii godhachuun itti mariyatee ejjennoo tokkorra gawuu qaba. Walgayii akkanaa qopheessuuf gareen qindeessu tokko dhaabbachuu qaba. Gareen kun karoora baasee walgayiin Hawaasaa Oromoo Ameerikaa Kaabaatti, Auroopaatti, Awstraaliyaatti, Akkasumas Biyya Araabaatti haala walfakkaataa dhaan akka qophaawu taasisa. Ejjeennoon walfakkaatu akka fudhatamu taasisuuf jiruu barbaachisu hojjeta. Dhimma kanarratti Oromoon biyya Ormaa jiraatu mariyachuu qaba.
Posted by Hasan Ismail at 2:38 PM